amiri baraka Archives - Page 10 of 19 - The North | Newark
Unity and Struggle (V 6, No 1-6 May-June 1977)
Volume 6, Number 1-6 of Unity and Struggle, the national newspaper of the Revolutionary Communist League (formerly the Congress of Afrikan People), published in June 1977. Unity and Struggle was one of several media outlets developed by Amiri Baraka to promote Black cultural nationalism in Newark and the nation. — Credit: NYU Tamiment Library
Unity and Struggle (V 5, No 7-10 October 1976)
Volume 5, Number 7-10 of Unity and Struggle, the national newspaper of the Revolutionary Communist League (formerly the Congress of Afrikan People), published in October 1976. Unity and Struggle was one of several media outlets developed by Amiri Baraka to promote Black cultural nationalism in Newark and the nation. — Credit: NYU Tamiment Library
Unity and Struggle (V 5, No 5 May 1976)
Volume 5, Number 5 of Unity and Struggle, the national newspaper of the Congress of Afrikan People (CAP), published in May 1976. Unity and Struggle was one of several media outlets developed by Amiri Baraka to promote Black cultural nationalism in Newark and the nation. — Credit: NYU Tamiment Library
Unity and Struggle (V 5, No 6 June 1976)
Volume 5, Number 6 of Unity and Struggle, the national newspaper of the Revolutionary Communist League (formerly the Congress of Afrikan People), published in June 1976. Unity and Struggle was one of several media outlets developed by Amiri Baraka to promote Black cultural nationalism in Newark and the nation. — Credit: NYU Tamiment Library
Unity and Struggle (V 5, No 1 January 1976)
Volume 5, Number 1 of Unity and Struggle, the national newspaper of the Congress of Afrikan People (CAP), published in January 1976. Unity and Struggle was one of several media outlets developed by Amiri Baraka to promote Black cultural nationalism in Newark and the nation. — Credit: NYU Tamiment Library
Unity and Struggle (V 5, No 2 February 1976)
Volume 5, Number 2 of Unity and Struggle, the national newspaper of the Congress of Afrikan People (CAP), published in February 1976. Unity and Struggle was one of several media outlets developed by Amiri Baraka to promote Black cultural nationalism in Newark and the nation. — Credit: NYU Tamiment Library
Unity and Struggle (V 5, No 4 April 1976)
Volume 5, Number 4 of Unity and Struggle, the national newspaper of the Congress of Afrikan People (CAP), published in April 1976. Unity and Struggle was one of several media outlets developed by Amiri Baraka to promote Black cultural nationalism in Newark and the nation. — Credit: NYU Tamiment Library
Unity and Struggle (V 4, No 14 October 1975)
Volume 4, Number 14 of Unity and Struggle, the national newspaper of the Congress of Afrikan People (CAP), published in October 1975. Unity and Struggle was one of several media outlets developed by Amiri Baraka to promote Black cultural nationalism in Newark and the nation. — Credit: NYU Tamiment Library
Unity and Struggle (V 4, No 13 October 1975)
Volume 4, Number 13 of Unity and Struggle, the national newspaper of the Congress of Afrikan People (CAP), published in October 1975. Unity and Struggle was one of several media outlets developed by Amiri Baraka to promote Black cultural nationalism in Newark and the nation. — Credit: NYU Tamiment Library